Krizy mitambatra: Corona any amin'ny faritra misy ny fifanolanana - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Krizy mitambatra: Corona any amin'ny faritra misy ny ady
Aogositra 15, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Sakena Yacoobi, tale jeneralin'ny Ivon-toerana fianarana Afghana, miasa miaraka amin'ny tanora. (Sary: AIL)
Fidiran'ny mpanonta. Ny lahatsoratra teo aloha tao amin'ny andian-dahatsoratra Corona Connections dia nifantoka indrindra tamin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fetezan'ireo rafitra manerantany izay naseho miharihary fa voan'ny areti-mandringana. Amin'ity lahatsoratra ity dia miantso ny sain'ny mpanabe momba ny fandriam-pahalemana isika fa ny COVID dia nahatonga ny ankamaroan'ireo tsy rariny ireo hihamafy kokoa.
"Ity areti-mandringana ity dia nisy fiatraikany ratsy teo amin'izay efa nisy toe-javatra mahatsiravina." - Sakena Yacoobi, Tale jeneralin'ny Ivotoerana fianarana ny Afghana
Mpikambana mavitrika efa ela tao amin'ny tambajotra IIPE / GCPE, Sakena Yacoobi no nanomboka ny asany tamin'ny fanabeazana ny vehivavy Afgàna tany amin'ireo toby izay nitadiavan'izy ireo fialofana avy amin'ny Taliban. Nandritra ny taona maro taorian'ny nitondrana ny asa tany Afghanistan, tamin'ny alàlan'ny Ivon-toerana fianarana Afghana (AIL), namorona programa fianarana sy serivisy manerana ny firenena izy izay nanova ny fiainan'ny olona an'arivony. Na dia tamin'ny herisetra tamin'ny ady an-trano aza dia nitohy ny asa ary mbola mitohy.
Na izany aza, araka ny hita avy amin'ny taratasiny ho an'ireo mpanome (namboarina etsy ambany, ny taratasy tany am-boalohany dia hita eto), io asa io dia nisy fiatraikany lalina tamin'ny COVID-19. Ny asan'ny AIL dia novaina be mba hanomezana tolotra takian'ny areti-mifindra, saingy tsy nomen'ny governemanta. Ny toe-javatra atrehin'i Sakena sy AIL dia naverina natao ho an'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena eran'izao tontolo izao; na taiza na taiza, araka ny nosoratan'ny mpikambana iray tamin'ny tamba-jotra, dia “nalemy ny governemanta.” Ny fehintsoratra fahadimy amin'ilay taratasy, izay nalaina ny teny etsy ambony, dia mamintina ny zava-misy, tsy any Afghanistan ihany, fa any amin'ireo firenena hafa izay manakorontana ny olony ny fitondram-panjakana sy ny governemanta tsy mandray andraikitra. Manerana an'izao tontolo izao, ny fiarahamonim-pirenena, toy ny AIL, dia miezaka, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny loharanon-karena, sendra sakana marobe amin'ny lafiny rehetra, handray andraikitra amin'ny fanohanana ny olona tsy mahomby amin'ny governemanta.
Ny AIL dia tranga mazava manoloana ny filan'ny andraikitry ny olom-pirenena ny fiaraha-monina misy azy ireo, ary ny fanabeazana hahafahan'izy ireo mandray izany. Eo no mipetraka ny fanantenana tsara indrindra amin'ny fahitan'ny vondrom-piarahamonin'izao tontolo izao ny fanao mahazatra vaovao izay naharesy ny tsy fahamarinana ara-drafitra sy ny tsy fetezan'ny normal premi-pandemioma. Amin'ny maha mpampianatra mpampihavana antsika, isika, na inona na inona toe-javatra iainan'ny firenentsika manokana, dia manolo-tena amin'ny fanatanterahana izany filàna izany. Na ny fiaretana ny iray amin'ireto Corona ireto dia miteraka toe-javatra sarotra na tsia, dia miray hina amin'ireo olona toa an'i Sakena izay ao anatin'izany toe-javatra izany izahay, ary hanao ny asa fanabeazana anay amin'izany toe-tsaina sy fomba fijery izany.
Taratasy avy amin'i Sakena Yacoobi
Tale jeneraly, Ivotoerana fianarana ny Afghana
Manantena aho fa ity taratasy ity dia tonga soa aman-tsara ho anao sy ny olon-tianao ary salama tsara. Tsapako fa efa elaela aho tsy nifandray mivantana taminao satria matetika aho no mandeha foana. Ny fandaharam-potoanako dia maodely foana amin'ny fitsangatsanganana na fanaovana seminera, kaonferansa fandriam-pahalemana, hetsika miresaka ary atrikasa manerantany. Raha ny marina, iray volana teo ho eo izay, dia nankany Etazonia aho avy tany Afghanistan mba hivory. Na izany aza, toy ny eran'izao tontolo izao, niafara tamin'ny tany aho ary tafahitsoka eto tsy afaka niverina tany Afghanistan noho ny areti-mandringana iraisam-pirenena iainantsika rehetra.
Rehefa mipetraka eto amin'ny efitranoko aho ary misaintsaina ny androko rehetra nandany ny fampiroboroboana sy ny firesahana tamin'ny olona an'arivony tamin'ny anaran'ny AIL sy ny vahoaka Afgana, tsy afaka ny tsy hahatsapa aho fa tsy afaka nifandray tamin'ny mpamatsy vola ahy tamin'ny sehatra manokana araka izay tiako. Fantatro fa nampiasa vola tamin'ity programa ity ianao na teo amin'ny ara-pihetseham-po na teo amin'ny lafiny ara-bola, ary heveriko fa mpiara-miombon'antoka amin'ny ezaka ataonao hanampiana ny mponin'i Afghanistan ianao.
Amin'ny maha mpiara-miasa ahy dia tiako ho fantatrao fa mbola miatrika ady tsy tapaka i Afghanistan. Na izany aza, mitohy mamiratra ny AIL ary manaparitaka haingana ny jirony amin'ny faritany rehetra ao amin'ny firenena. Ny vondrom-piarahamonina AIL dia manolo-tena sy mazoto amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka Afgana amin'ny alàlan'ny fanabeazana. Izahay dia mifantoka manokana amin'ny fanomezam-pahefana ny vehivavy sy ny zazavavy hanampy amin'ny famolavolana ho avy tsaratsara kokoa ho an'i Afghanistan ary tena faly tamin'ny valin'ny ezaka nataonay. Miaraka amin'ny fanampian'ny AIL sy ny fanohananao dia manova ny fiainany ny vehivavy. Manararaotra manohy fianarana ambaratonga ambony ihany izy ireo amin'ny farany, mahazo asa maharitra kokoa izay mandoa karama tsara ary manampy amin'ny famolavolana politika izay hanampy amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny farany.
Na dia eo aza ny fivoarana rehetra vitan'ny AIL nandritra ny taona maro, dia mbola lavitra ny dia lavitra eo alohantsika, izay mitaky antsika hampiasa fotoana sy ezaka betsaka amin'ny… Nandritra ity areti-mandringana ity, ny COVID-19 dia mamely ny firenena rehetra ary mandringa. toekarena. Araka ny azonao an-tsaina, ireo firenena manerantany fahatelo, toa an'i Afghanistan, no voa mafy indrindra.
Ity areti-mandringana ity dia nisy fiatraikany ratsy teo amin'izay efa toe-javatra mahatsiravina tany Afghanistan. Tsy i Afghanistan ihany no miatrika korontana sivily sy ady eto amin'ny firenena, fa izao kosa dia mamoy ny ainay bebe kokoa noho io virus io. Ny filaminana no mijanona ho iray amin'ireo olana lehibe indrindra satria mitombo ny fahantrana manerana an'i Afghanistan. Rehefa mihidy ny firenena, olona an'arivony maro izay mpiasa an-tsokosoko taloha, ankehitriny dia tsy manam-bola intsony hiasa sy hanome sakafo ho an'ny fianakaviany. Ny mpiasa mpifindra monina dia miraraka amin'ny firenena an'arivony avy amin'ny sisintany Iran sy Pakistan an'arivony. Vao mainka miharatsy ny toe-draharaha satria mpitsoa-ponenana ny ankamaroan'ireny olona ireny ary mitondra ny virus. Tsy misy toeran'izy ireo aleha hangataka fanampiana.
Tao amin'ny AIL izahay dia nahita ny tenantsika tao amin'ny toerana izay itodihan'ny mponin'i Afghanistan antsika sy ianteherany amintsika. Nandritra ny taona maro, namolavola laza izahay amin'ny fanomezana serivisy manara-penitra ny rehetra tsy misy fanavakavahana. Na dia nandidy ny hanakatonana ny sekoly sy ny fandaharana rehetra aza ny governemanta, miaiky ny AIL fa mbola tena mila olona ny olona. Fantatray fa ilaina ny fandraisana andraikitra mba hanampiana amin'ny ady amin'ny COVID-19 ary noho izany dia nidaroka tamin'ny tany izahay. Voalohany, mba hanakanana ny fielezan'ny virus, dia nanakana ny mpampianatra sy ny mpianatra tsy hanatrika ara-batana ny fandaharanay izahay ary hampiakatra avo roa heny ny isan'ny fiovan'ny hopitaly 6 anay. Manaraka izany dia nanomboka nizara sakafo isan-karazany izahay ho an'ireo tena mila izany - indrindra ny vehivavy, ny ankizy ary ny be antitra. Avy eo, navadinay ny fifantohanay amin'ny fananganana indray ireo ivon-toeranay ho toy ny fotodrafitrasa famokarana izay mamokatra tarehy, ampinga tarehy ary akanjo miaro.
Ny AIL dia nanohy nizara fitaovana an'arivony an'arivony ho an'ny fiarovan-tena manokana amin'ny toeram-pitsaboana, hopitaly, biraom-panjakana ary ny besinimaro. Lafo be ny vidin'ireto entana ireto ka tsy zakan'ny olona ny mividy azy ireo na dia misy eto amin'ny firenena aza. Ny AIL koa dia mampiasa ny onjampeo misy azy manokana, Radio Meraj, handefasana ampahibemaso ny maha-zava-dehibe ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny fanasana tanana, ary ny fanaovana tarehy amin'ny olona betsaka araka izay tratra. Izy io koa dia mandefa hafatra fizarana sakafo sy fampahalalana momba ny fitazonana ireo faritra madio sy madio.
Noho ny COVID-19 dia betsaka ny mpamatsy vola no tsy mamaly na miahanahana satria heverin'izy ireo fa nakatona ny fandaharanay. Saingy lazaiko anao izao, ny fandaharanay dia mandeha miova in-droa, ny mpikambana ao amin'ny fitantanan-draharaha ao amin'ny AIL dia any ivelany no miasa lohalaharana, manao vivery ny ainy sy ny fahasalamany manokana isan'andro. Nandritra izany rehetra izany, na dia nakatona aza ny varavaran'ny efitrano fianarantsika, dia tsy nilavo lefona tamin'ny iraka hitondranay fanabeazana ireo vehivavy sy ankizy ao Afghanistan. Ny AIL dia manavao hatrany sy manomana fitaovam-pianarana lavitra ho an'ireo zanatsika izay manana fidirana amin'ny smartphone na solosaina. Saingy mitoetra ny zava-misy fa ny 85% amin'ireo mpianatsika dia tsy nahita fianarana noho ny fanidiana. Mba handraisana an'io dia namorona fonosana entina mody izahay izay azon'ny mpianatra alaina sy miasa any an-trano. Ho fanampin'izay, nametraka laharana mafana izahay hamaly ny mpampianatra ny mpianatra raha toa ka / na rehefa tsy afaka manampy azy ireo amin'ny entimody ireo ray aman-dreniny.
Mampalahelo fa mahazo tatitra marobe hatrany momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ao an-trano izahay noho ny fanidiana sy ny fotoana fanampiny lanina ao ambanin'ny tafo iray. Ho valin'izany, ny AIL dia manana toro-hevitra manampy ny ray aman-dreny sy ny zanaka hiatrika ireo toe-javatra ireo izay nihamafy ny fanidiana. Mampiasa ny haino aman-jery sosialy ihany koa izahay ho toy ny fitaovana hanomezana vaovao momba ny fomba aharetana, mizara loharano ary mampihatra ny halaviran'ny fiaraha-monina.
Tsy niomana tamin'ity areti-mandringana ity izahay. Tsy nisy tamintsika. Mampalahelo fa betsaka ny olona tsy mandray an-tanana an'ity virus ity ary vokatr'izany dia an'arivony maro no voan'ny virus. Mitombo ny isan'ireo tranga ary tsy ampy ny fanampiana avy amin'ny governemanta. Noho io antony io, dia zava-dehibe ho an'ny AIL ny manohy manome fanamaivanana sy fanentanana mivantana ity virus ity ho an'ny vahoaka Afgana.
Fantatro fa maro no mijaly, fa ny firenena toa an'i Afghanistan dia tsy vonona velively hiatrika izany. Voaporofo fa mpiara-miombon'antoka feno hatsaram-panahy mandritra ny taona maro ianao ary tsy ho adinonay mihitsy ny fahalalahan-tanananao. Ny fanohanana sy ny fangoraham-pon'ireo mpamatsy vola antsika no ivon-kevitry ny fikambananay ary laharam-pahamehana amin'ny fanampiana anay hamita ny iraka ampanaovina anay, indrindra mandritra ny fotoana toa izao Samy mankasitraka azy roa tonta izahay sy ny AIL, satria nanohana anay taloha ianareo, raha mieritreritra ny hamatsy vola ny ezaka ataonay mandritra izao fotoan-tsarotra izao ianao. Raha tsy mamela anao hanohana anay ny toe-javatra misy anao ankehitriny, dia mbola ho fanampiana lehibe sy fankasitrahana lalina avy amin'ny fiarahamonina Afghana ny vola rehetra. Raha manohy mihazakazaka amin'ny fahaizantsika ankehitriny isika, tsy misy fanampiana fanampiny, dia terena isika hampijanona ireo ezaka fanampiana sy programa izay iasantsika mafy mba hitazomana sy hihazakazahana.
Amin'ny anaran'ny vehivavy sy ny zanak'i Afghanistan, dia tiako ny misaotra anao noho ny hatsaram-panahy, fiaraha-miory ary fangorahana. Araka ny nolazain'i Rumi, "Arakaraka ny anomeanao no handraisanao fitahiana avy amin'Andriamanitra". Avy amin'ny foko lalina, misaotra anao noho ny fotoananao, ary mbola hivavaka aho ho an'ny fahasalamana sy fahasambarana ho anao sy ireo olon-tianao. Hitahy anao mandrakariva amin'ny famindram-pony i Allah.
Mamorona fanantenana iraisam-pirenena
Ivon-toerana fianarana Afghana
# fanabeazana amin'ny fifandonana
122 acciones fáciles (y difíciles) para la paz / 122 hetsika mora (sy mafy) ho an'ny fandriam-pahalemana
Fandraisana anjara amin'ny fianakavianam-pianakaviana amin'ny boky momba ny fanabeazam-pirenena
“Misaona amin'ny alàlan'ny areti-mandringana”
Aprily 15, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Misaona ny olona noho ny fahaverezan'ny zavatra maro: ny fivezivezena, ny fifehezana, ny filaminan'ny asa, ny fiadanan-tsaina, ankoatry ny hafa. Malahelo izahay miaraka amin'ny fahaverezan'ny ara-dalàna ary malahelo noho ny fisalasalana aterak'izany. Mpanolotsaina alahelo, Cathy S. Babao, MA no mitety antsika mandritra ny dingan'ny alahelo sy ny fomba hitantanana azy io.
[tohizo ny famakiana…]
Tantara mitohy amin'ny virus roa: fiainana very, fotoana tsy very ary fotoana iray hananana fanantenana
Jona 5, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Ity Corona Connection ity, aingam-panahy avy amin'ny lahatsoratr'i Nancy Sylvester, dia manasa fisaintsainana virus roa: COVID-19 sy fanavakavaham-bolon-koditra. Voalohany, inona no azontsika ianarana avy amin'ny famindram-po sy ny fikirizan'ny Dr. Anthony Fauci? Faharoa, inona no azo ianarana avy amin'ilay viriosy fanavakavaham-bolon-koditra miharihary izay nanimba ny fahamendrehana ara-pitondrantenan'ny firenentsika hatramin'ny niandohany? [tohizo ny famakiana…]
Mamaly ny manjo ny COVID Ireo eo am-pototry ny tohatra ara-toekarena
Jolay 21, 2020 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Ity Corona Connection ity dia manadihady bebe kokoa ny fijalian'ny olona marefo indrindra apetraky ny rafitra ara-toekarena tsy ara-drariny ataon'ny COVID-19 izay mampiharihary sy miharatsy ary manadihady bebe kokoa ny tena ilaina sy ny fahombiazan'ny hetsika eo noho eo sy eo an-toerana rehefa tsy mihetsika ny governemanta. [tohizo ny famakiana…]